CUNTO FUDUD OO CAVIAR AH OO CAGAAR AH KA SOO BAXA XILLIGA JIILAALKA: SIDA DHADHANKA LOO XIRO KHUDRADDA - SOOSAARKA DALAGGA
Cunto-karis ah oo lagu karsaarayo caviar ee barkadda jiilaalka
Squash, ama bocorka suufka, waxaa laga helaa cuntadeena wax yar ka yar inta ehelkooda u dhow - zucchini iyo bocorka. Oo waa gebi ahaan cadaalad, sababta oo ah khudradda this ma aha oo kaliya dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale u wanaagsan caafimaadka. Intaa waxaa dheer, laga bilaabo waxaad ka samayn kartaa noocyo kala duwan oo suxuun oo kala duwan iyo cunto fudud. Tusaale ahaan, caviar, kaas oo si farxad leh ula yaabi doona dhadhankiisa iyo wuxuu u baahan doonaa dadaalka ugu yar.
Takhasuska dhadhaminta iyo faa'iidooyinka rashka
Cuntadani waxay la mid tahay nooca loo yaqaan 'kookar' oo loo yaqaan 'kookar' oo laga helo zucchini badan.
Waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido sida loo karsado khudaar bata.
Tartanadu waxay leeyihiin dhadhan adag iyo hilib jilicsan. Sidaa darteed, waxay si fiican u la socdaan qiiqa caadiga ah ee karootada, basasha iyo yaanyada.
Waxa intaa dheer oo cusbo, sonkor, qalaal iyo dhir udgoon ayaa kuu oggolaanaya inaad bedesho dhadhan khafiif ah bocorka cagaarka ka baxsan aqoonsiga. Cunista raashinka waxay ka caawisaa hagaajinta dheecaanka dheecaanka ah iyo dib u soo celinta glycogen sababtoo ah fiiro gaar ah oo ka mid ah xeryahooda alkaline ee khudaarta.
Cellulose waxay xoojisaa qashinka dufanka iyo sunta, iyo walxaha cuntadu waxay kuu oggolaanayaan inaad ka takhalusto kolestaroolka xad-dhaafka ah. Sidoo kale, saxanka bocorka ayaa leh saameyn sahlan oo dheecaan leh.
Talo-tallaabo tallaabo tallaabo leh oo sawir leh
Karinta rashka uma baahna wakhti badan iyo xirfado gaar ah. Cuntadani dhadhan fiican leh ayaa laga sameeyey min ugu yaraan khudaarta la heli karo, laakiin waxay leedahay dhadhan cajiib ah oo dhadhan fiican leh.
Waxa aad u baahan tahay jikada: qalabka jikada iyo maacuunta
Wixii diyaarinta bakhaarka u baahan doonaa:
dheri leh derbi qaro ama aluminium;
dhowr saxan oo qoto dheer.
Baro wax badan oo ku saabsan siyaabo kala duwan ee goynta barkadda jiilaalka.
0.5 kg oo yaanyo casaan u bislaaday;
0.5 kg ee karootada;
300 g oo basasha;
dhir udgoon - dhadhamin.
Khudradda waa la dhaqaa oo googooyaa gogo 'yaryar, oo ku habboon in lagu shubo blender.
Dhammaan khudradda la jarjaray waa dhul ku jira shahwad ilaa iyo inta uu le'eg yahay.
Faafi soosaarida soo-saarka ah ee digada oo si fiican isku walaaq.
Ku dar milix (1-1.5 tbsp L.), sonkorta (2-3 tsp.), Saliidda dhirta (150-170 g), 9% sirko (1-1.5 tbsp L.).
Isku darku waa inuu karkaraa ugu yaraan saacad haddii loo diyaariyo kaydinta muddada dheer. Haddii aad qorsheyneyso inaad si dhakhso ah u cuno karkaar, 40 daqiiqo ayaa ku filan karinta cuntada.
Gawaarida kulul waxaa lagu ridayaa dhalooyinka, iyaga oo dillaacay, loo rogay oo ku duudduubay tuwaal.
Video: Qodobo lagu kariyo cunto kariye oo caano ah
Ka akhri cuntooyinka dabaysha qasacadaha guriga.
Sida loo karsado caviar ka yaryar mashiinka mashiinka qafiifka ah
Alaabta loo baahan yahay:
2 basbaaska qabta macaan;
3 xabo oo toon ah;
4 qaado oo saliidda cuntada ah;
Khudradda waa la dhaqaa oo la jarjaray.
Isku kari tamaandhada, iyaga xoqin, jidhkana jarjar.
In baaquli multi-cooker, ku shub saliid qaar ka mid ah iyo faafin khudaarta.
Ku dar dhir udun dhadhanka, xir daboolka oo dooro habka "Pilaf".
Ka dibna massku wuxuu ku faafaa blender oo wuxuu ku daboolaa xaalad baradho la shiiday.
Gawaarida la dhammeeyey ayaa la dhigaa gasacadaha waxaana lagu keydiyaa qaboojiyaha iyagoo daboolan xiran muddo aan ka badnayn afar bilood.
Waa muhiim! Wixii soo ururinta boomaatada dhalinyarada ee rashka ah ayaa loo isticmaali karaa iyadoo aan la kala saarin. Patties ka badan oo u bislaaday waa in la nadiifiyaa oo miraha laga saaro, oo kaliya ka dibna u sii wad hawlgalka.
Cunnooyinka laga bilaabo kaabayaasha ka hor-diyaarinta
Intaa waxaa dheer in bocorka cayriin ceeriin, loogu talagalay diyaarinta ee banaan waxaa loo isticmaali karaa iyo dubay ama la dubay khudaarta. Tani waxay siin doontaa saxanka caanka ah dhadhan cusub iyo dhadhan.
Si aad u karsatid nooca caviar waxaad u baahan doontaa:
1.5 kg oo kabak;
3 basasha waaweyn;
4 qaado oo keega yaanyo ah;
0.5 qaado oo khal ah;
Squashes dhaq, qallalan, ka saar dabo, jarjar iyo ulo.
Khudaarta la dubay waxaa la dhex mariyaa Booqday Furimaha Dagaalka.
Nalalka ayaa la jarjarey siddab kala badh oo la dubay subagga.
Ugu dambeyntii, ku dar jajabka yaanyo ee basasha.
Khudaarta diyaarka ah ayaa lagu ridayaa digsi, khal iyo khudradda ayaa lagu daraa dhadhanka.
Kawaawin kari si aad u dheehoto.
Gawaarida diyaarka ah ee la diyaariyey ee dhalooyinka ku jira xaalad qabow.
Ma taqaanaa? Marka la eego nudaha lecithin, bacaha ayaa ka yaryar oo kaliya ukunta.
5 kg oo baradho ah;
1 kg oo karootada ah iyo basasha;
1.5 kg ee yaanyada bislaado;
5 qaado oo cusbo ah;
0.5 madax oo toon ah;
3 alaabta basbaas kulul;
0.5 muraayad tufaax oo khal cider ah;
3 qaado oo sonkor ah;
1 koob oo saliid ah;
Waxaad shiishaa khudradda la jarjaray ee digsi: basasha, squash, basbaaska macaan, dabacasaha.
Yaanyo Peel iyo toon iyo fal waxashnimo leh.
Khudaarta dufanka leh iyo boodada, ku dar basbaaska iyo cagaarka jarjaran.
Ku dar isku dar ah cauldron, ku dar cusbo, sonkor iyo kari ilaa nus saac.
Shan daqiiqo ka hor inta aadan dabka ka demin, ku dar khal.
Video: sida loo karsado caviar laga bilaabo rootiga la shiilay
Sida loo dhigo meelo banaan
Caviar waxaa si fiican loo hayaa laba sano laga bilaabo goosashada. Jarso leh baaldheer si fiican loogu hayo qaboojiyaha ama qaybta caadiga ah.
Waa muhiim! Saxanka bocorka waa 90% biyaha iyo alkaliin. Sidaa daraadeed, waxaa ugu wanaagsan in khudraddaas la isticmaalo hilibka iyo waxyaabaha kale ee borotiinka ah.
Xaaladda ugu weyn ee ku jirta waxyaabaha ay ka kooban yihiin gasacadaha cusub waa qol qallalan oo qabooban. Maadaama ay khalalku tahay ilaaliye wanaagsan, rashka ayaa lagu kaydin karaa xitaa qolol caadi ah ee guri dabaq ah. Guud ahaan, heerkulka kaydinta ee rashadu waa inuusan ka badnaan 20 darajo, iyo qoyaanka hawada - 75%.
Iyada oo la xareeyo shaybaarka miiska
Qeybaha jilicsan iyo suufka leh ee khudradda cagaaran ayaa si fiican u socda. Nooca aan caadi ahayn waxay kuu ogolaaneysaa inaad walaaqdo bocorka daboolka ah, waxay u muuqan doontaa mid cajiib ah. Wixii buuxin, waxaad isticmaali kartaa hilibka oo keliya, laakiin sidoo kale khudaarta, jiiska, ukunta, boqoshaada iyo badarka. Squashes waa delicious in la shiilay, la karkariyey, la qaado iyo la dubay. Waxaa loo isticmaalaa in lagu buuxiyo pies, canjeelada, canjeelada, digirta, iyo xitaa bam. Cagaashu waxay si fiican ugu isku dhafan yihiin khudaarta kala duwan sida maraq, maraq la shiiday, digirta qudaarta.
Ma taqaanaa? Ka tarjumey ereyga Faransiiska "squash" macneheedu waa "riwaayad".
Iyada oo dadaal yar oo aad waqti badan ku bixiso, waxaad samayn kartaa cunto fudud oo caafimaad leh. Iyo xaqiiqda ah in lagu daro dhir udub oo kala duwan ayaa ku daraya cunto karinta wax ka mid ah hal-abuurnimo, oo kuu oggolaanaya inaad la cayaarto dhadhanka caadiga ah, ayaa geeddi-socodka sidoo kale xiiso leh. Cunto qabow!
Sawirada iyo sifooyinka beeritaanka Pelargonium Pak Viva. Raadi noocyo caan ah - Rosita, Madeline iyo Carolina
Sidee loo aqoonsan karaa uurka uurka iyo waxa la sameeyo haddii aan la daboolin
Kalluunka hilibka lo'da iyo meelaha caanaha lagu cuno waa kala duwanaantooda. Badanaa waxa loo qaybiyaa laba nooc: hilibka iyo caanaha iyo caano iyo hilib taas oo ku xiran tayada ay tahay mid tifaftiran. Marka la doorto ilmo gaar ah, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo ujeedada ay tahay xayawaanku, iyo tilmaamayaasha wax soo saarka ah, iyo xaaladaha xabsiyada lagu hayo cunto. Read More
Sida loo abuuro oo u koro walxaha Waller ee dhirta (saboolka, madadaalo)
Cunnooyinka loogu talagalay kaabajka caadiga ah iyo kaabashka marinade kulul. Sida loo doorto nooca qudaarta iyo qajaar la isku qurxiyo?